Архитектурный комплекс Йех Пулу, Бали, Индонезия » Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Yeh Pulu
Kompana maritrano vato fahiny Yah Pulu
Yeh Pulu Review
Yeh Pulu dia ao amin'ny tanànan'i Bedulu. Tamin'ny andro taloha, io renivohitra io dia renivohitry ny fanjakana kely iray. Androany ny mponina ao Bedulu dia miaina fiainana milamina sy refy. Ny rafitra maritrano dia noforonina tamin'ny taonjato faha-14.
Tsy dia lehibe ity toerana ity. Ho hitanao eto:
Bas-reliefs avy amin'i Yeh Pulu
Ny bas-relief dia mampiseho sary hoso-doko amin'ny fiainana antonony any Bali. Manam-pahaizana maro no tonga tamin'ny fanatsoahan-kevitra fa ny mpanoratra ireo sary rehetra ireo dia tompony iray, teraka mazava tao amin'ity faritra ity. Ny marokoroko mitovy ihany, nefa miaraka amin'izay dia tsy ny tsipika zoro, ary ny fomba tany am-boalohany tao anaty atiny ara-pientanam-po no mitarika an'io fehin-kevitra io.
Yeh Pulu. Fijery zanabolana
adiresy: Yeh Pulu, Raya Goa Gajah 80571, Pejeng Kelod, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.531671, 115.293038
Alatsinainy - 9.00 - 17.00
Talata - 7.00 - 18.00
Alarobia - 7.00 - 18.00
Alakamisy - 7.00 - 18.00
Zoma - 7.00 - 18.00
Sabotsy - 7.00 - 18.00
Alahady - 7.00 - 18.00
Toeram-pananganana Yeh Pulu
Yeh Pulu. Takela-pahatsiarovana
Fhod mankany Yeh Pulu
Zoo amin'ny sarintany Bali